ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ လိုအပျသောအာဟာရမြား | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကိုယျဝနျဆောငျကာလကို ပထမပိုငျး၊ ဒုတိယပိုငျး၊ တတိယပိုငျးဆိုပွီး သုံးပိုငျးခှဲခွားထားပါတယျ။ အဲ့ဒီကာလတှမှော လိုအပျတဲ့အာဟာရတှကေ မတူတဲ့အတှကျ မမေတေို့အနနေဲ့ သခြောသိထားဖို့ လိုပါတယျ။
>> ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ပထမပိုငျး
ကိုယျဝနျသုံးလအထိကို ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ပထမပိုငျးလို့ သတျမှတျပါတယျ။ ဒီအခြိနျဟာ ဘဘေီလေးရဲ့ ကိုယျလကျအင်ျဂါတှေ၊ ဦးနှောကျတှေ ဖှံ့ဖွိုးတဲ့အခြိနျဖွဈပွီး အရေးကွီးဆုံးအခြိနျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ လိုအပျတဲ့အာဟာရတှကေတော့ -
1. ဖောလဈအကျစဈ - ကလေးဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုကို ကောငျးစတေဲ့အပွငျ ကြောရိုးနှဈခှဖွဈတဲ့ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုကို ကာကှယျပါတယျ။ တကယျက ကိုယျဝနျဆောငျဖို့ စပွီး ပွငျဆငျနပွေီဆိုတာနဲ့ ဖောလဈအကျစဈကို နစေ့ဉျမှနျမှနျ သောကျပေးသငျ့ပါတယျ။
2. ဗီတာမငျ B6 - ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ ပြို့အနျခွငျးကို သကျသာစပေါတယျ။
3. DHA - သန်ဓသေားရဲ့ ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစဖေို့ အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။
4. ဗီတာမငျဒီ - ကိုယျဝနျဆောငျအစောပိုငျးကာလတှငျ ဖွဈတတျသော ပြို့အနျခွငျးကို သကျသာစတေဲ့အပွငျ အခငျြးရောငျရမျးခွငျးကိုပါ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
>> ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ဒုတိယပိုငျး
1. ဗီတာမငျဒီ D 400 IU - ရငျသှေးလေးရဲ့ အရိုးနဲ့ သှားမြား သနျမာကွံ့ခိုငျစမေယျ့အပွငျ မိခငျ ကိုယျဝနျဆိပျတကျခွငျးနဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျဆီးခြိုဖွဈခွငျးကိုပါ လြှော့ခနြိုငျပါတယျ။
2. ကယျလျစီယမျ - မိခငျ ကိုယျဝနျဆိပျတကျခွငျးနဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျသှေးတိုးခွငျးကို လြှော့ခပြေးနိုငျသလို ရငျသှေးငယျရဲ့ သှားနဲ့အရိုးမြား သနျမာဖို့ အထောကျအကူပေးပါတယျ။
3. သံဓာတျ - နှလုံး၊ အဆုတျနဲ့ ကွှကျသားမြားအတှကျ လိုအပျသော အောကျဆီဂငျြပမာဏကို ရရှိစပွေီး သကျလုံကောငျးစပေါတယျ။
>> ကိုယျဝနျဆောငျကာလ တတိယပိုငျး
1. သံဓာတျ - ပေါငျမပွညျ့ လမစဘေဲ့ ကလေးမှေးခွငျးကို ကာကှယျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
2. မဂ်ဂနီဆီယမျ - အခြိနျမတိုငျမီ ကလေးစောမှေးခွငျးကို ကာကှယျနိုငျပါတယျ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလကို ပထမပိုင်း၊ ဒုတိယပိုင်း၊ တတိယပိုင်းဆိုပြီး သုံးပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။ အဲ့ဒီကာလတွေမှာ လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေက မတူတဲ့အတွက် မေမေတို့အနေနဲ့ သေချာသိထားဖို့ လိုပါတယ်။
>> ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ပထမပိုင်း
ကိုယ်ဝန်သုံးလအထိကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ပထမပိုင်းလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ ဘေဘီလေးရဲ့ ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေ၊ ဦးနှောက်တွေ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီး အရေးကြီးဆုံးအချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကတော့ -
1. ဖောလစ်အက်စစ် - ကလေးဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကောင်းစေတဲ့အပြင် ကျောရိုးနှစ်ခွဖြစ်တဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကာကွယ်ပါတယ်။ တကယ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ စပြီး ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတာနဲ့ ဖောလစ်အက်စစ်ကို နေ့စဉ်မှန်မှန် သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
2. ဗီတာမင် B6 - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ပျို့အန်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
3. DHA - သန္ဓေသားရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
4. ဗီတာမင်ဒီ - ကိုယ်ဝန်ဆောင်အစောပိုင်းကာလတွင် ဖြစ်တတ်သော ပျို့အန်ခြင်းကို သက်သာစေတဲ့အပြင် အချင်းရောင်ရမ်းခြင်းကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
>> ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ဒုတိယပိုင်း
1. ဗီတာမင်ဒီ D 400 IU - ရင်သွေးလေးရဲ့ အရိုးနဲ့ သွားများ သန်မာကြံ့ခိုင်စေမယ့်အပြင် မိခင် ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဆီးချိုဖြစ်ခြင်းကိုပါ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
2. ကယ်လ်စီယမ် - မိခင် ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်သွေးတိုးခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်သလို ရင်သွေးငယ်ရဲ့ သွားနဲ့အရိုးများ သန်မာဖို့ အထောက်အကူပေးပါတယ်။
3. သံဓာတ် - နှလုံး၊ အဆုတ်နဲ့ ကြွက်သားများအတွက် လိုအပ်သော အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို ရရှိစေပြီး သက်လုံကောင်းစေပါတယ်။
>> ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ တတိယပိုင်း
1. သံဓာတ် - ပေါင်မပြည့် လမစေ့ဘဲ ကလေးမွေးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. မဂ္ဂနီဆီယမ် - အချိန်မတိုင်မီ ကလေးစောမွေးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။